Shirkado iyo Warshad Soo Uruuriya Boodh tayo sare leh oo tayo sare leh | YiZheng
Waa maxay Aruuriyaha Boorka Duufaanta?
Uruuriyaha Boorka Duufaanta waa nooc ka mid ah aaladda siigada. Aruuriyaha boodhku wuxuu leeyahay karti ururin sare si uu ugu boodbo culeys gaar ah oo gaar ah iyo walxaha qaro weyn. Marka loo eego isku-uruurinta boodhka, dhumucda qurubyada boodhka waxaa loo isticmaali karaa ka-qaadista ugu horreysa ee boodhka ama ka-qaadista boodhka hal-marxaladda ah siday u kala horreeyaan, gaaska wasakhaysan ee gaaska ku jira iyo gaaska heerkulkiisu sarreeyo ee gaaska ku jira, sidoo kale waa la soo ururin karaa oo dib loo isticmaali karaa.
Qeyb kasta oo ka mid ah aruuriyaha boodhka duufaanta waxay leedahay saamiga cabbirka qaarkood. Isbeddel kasta oo ku yimaada saamigan wuxuu saameyn ku yeelan karaa waxtarka iyo cadaadiska luminta aruuriyaha boodhka duufaanka. Dhexroorka boodhka aruuriya, cabbirka marinka hawada iyo dhexroorka tuubada qiiqa ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee saameynta ku leh. Intaa waxaa dheer, arrimo qaar ayaa faa'iido leh si loo hagaajiyo waxtarka ka-qaadista boodhka, laakiin waxay kordhin doonaan luminta cadaadiska, sidaas darteed hagaajinta qodob kasta waa in la tixgeliyaa
Waa maxay aruuriyaha boodhka budada duufaanka loo adeegsado？
Kuweena Uruuriyaha Boorka Duufaanta waxaa si weyn loogu isticmaalaa birta, shubka, qalabka dhismaha, warshadaha kiimikada, hadhuudhka, sibidhka, batroolka, warshadaha fudud iyo warshadaha kale. Waxaa loo isticmaali karaa qalab dib loo warshadeeyay si loogu kabo boodhka walxaha aan fiyuuska lahayn iyo ka saarista boodhka.
Noocyada aruurinta Boorka Duufaanta
1. Ma jiraan qaybo dhaqaaqaya oo ku dhex jira aruuriyaha siigada. Dayactir ku habboon
2. Markaad la macaamilayso mugga hawo weyn, waxay ku habboon tahay cutubyo badan in loo adeegsado isbarbar socda, iska caabbinta waxtarka saamayn ku yeelan mayso.
3. Qalab Sooca qalabka uumiga soosaara boodhka ayaa iska caabin kara heerkulka sare ee 600 600. Haddii alaab heerkulka sare oo gaar ah u adkaysta la isticmaalo, waxay kaloo iska caabin kartaa heerkulka sare.
4. Ka dib marka uruuraha boodhka ku qalabeysan yahay dahaadh u adkeysanaya dharka, waxaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo gaaska qiiqa oo ay ku jiraan boodh xoqan oo sarreeya.
5. Waxay ku habboon tahay dib-u-warshadaynta boodhka qiimaha leh.
Hawlgalka & Dayactirka
Ku Uruuriyaha Boorka Duufaanta qaab dhismeedka waa ku fududahay, si fudud loo soo saaro, loo rakibo, loo dayactiro loona maareeyo.
(1) Xaddidyada hawlgalka ee deggan
Xuduudaha hawlgalka ee aruuriyaha boodhka duufaanka badanaa waxaa ka mid ah: xawaaraha hawada ee soo-ururiyaha siigada, heerkulka gaaska la warshadeeyay iyo isku-uruurinta tirada badan ee gaaska boodhka ku jira.
(2) Kahortaga daadinta hawada
Marka duufaanta aruuriyaha duufaantu ay daadato, waxay si daran u saameyn doontaa saameynta boodhka. Marka loo eego qiyaasaha, waxtarka boodhka ayaa hoos u dhici doona 5% marka daadinta hawadu ee koorta hoose ee uruuraha boodhku tahay 1%; waxtarka boodhka ayaa hoos u dhici doona 30% marka daadashada hawadu tahay 5%.
(3) Ka-hortagga xirashada qaybaha muhiimka ah
Waxyaabaha saameeya xirashada qaybaha muhiimka ah waxaa ka mid ah culeyska, xawaaraha hawada, qurubyada boodhka, iyo qaybaha duugoobay waxaa ka mid ah qolof, koor iyo ka bixida busta.
(4) Ka fogow xannibaadda boodhka iyo boodhka oo is uruursada
Xirnaanshaha iyo boodhka isku uruursiga duufaanka aruuriyaha duufaanka badanaa wuxuu ka dhacaa agagaarka barta boodhka, marka labaadna wuxuu ku dhacaa dhuumaha qaadashada iyo qiiqa.
Soo Bandhigida Muuqaalka Muuqaalka Duufaanta Duufaanka
Xulashada Moodalka Uruurinta Boodhka Duufaanta
Waxaan qaabeyn doonaa Uruuriyaha Boorka Duufaanta ee tilmaamaha kugu habboon adiga oo raacaya nooca mashiinka lagu qalajiyo bacriminta iyo xaaladaha shaqada ee dhabta ah.
Hore: Heerkulka Sare ee Warshadaha oo Qabsaday Fan Fan
Xiga: Gubista Dhuxusha Dhaca
Hordhac Waa maxay Mashiinka Qalabaynta Bacriminta Wareegta Drum Rotary? Rotary Drum Compound Bacriminta Granulator waa mid ka mid ah qalabka muhiimka ah ee warshadaha bacriminta xarunta. Habka ugu muhiimsan ee shaqadu waa higgaadinta qolofta qoyan. Iyada oo loo marayo qadar gaar ah oo biyo ah ama uumiga ah, bacriminta aasaasiga ah ayaa si buuxda kiimiko ahaan looga falceliyay meeriska